तपाईलाई थाहा छ, आगामी दश वर्षमा नाम र दाम दुवै दिने दश रोजगारीबारे ? | Rajmarga
तपाईलाई थाहा छ, आगामी दश वर्षमा नाम र दाम दुवै दिने दश रोजगारीबारे ?
आगामी १०–१५ वर्षमा कुन चाहिँ करिअर अप्शन हुनेछ, जसमा सबैभन्दा बढी रोजगारी र पारिश्रमिक होला ? तपाई पनि थाहा पाउनुस् र अहिलेबाटै आफूलाई तयार पार्नुस त्यसका लागि । विशेषज्ञ र अध्ययनहरुले यी दश करिअर अप्शन आगामी १०–१५ वर्षमा उच्च आकर्षक र लाभदायी हुनेछ ।
त्यसो त अहिले पनि यो निकै हट र किफायदी प्रोफेशन हो । तर आगामी दिनमा ऐप डेभलप गर्नेहरुको माग उच्च हुने पक्का छ। प्रविधिको तिब्र परिवर्तन र विकाससँथगै घर, उद्योग, खेत, पसल हरेक स्थानमा ऐप आवश्यक हुनेछ ।
जिन्दगीको हिसावमा जिन्दगीलाई सहज बनाउनका लागि नयाँ नयाँ सफ्टवेयर आवश्यक हुन्छ । विभिन्न प्रकारका सफ्टवेयर चाहिन्छ । त्यसैले सफ्टवेयर बनाउनेहरुको आवश्यकता बढी नै हुनेछ ।
प्राविधिको परिवर्तनसँगसँगै डाटा पनि परिवर्तन हुनेछ र बढ्ने पनि छ। यस्तोमा त्यसको विश्लेषण गर्ने र त्यसलाई सुरक्षित राख्नेहरुको माग उच्च हुने निश्चित ।
करिअर एक्सपर्टहरुका अनुसार आगमी १०–१५ वर्ष ब्युटिशियन, फिटनेश ट्रेनर, ट्युशन टिचर, लाइफ कोच वा पर्सनल ब्राडिङका साथै काउसिलर्स र थेरापिस्टजस्ता एक्सपर्टको माग उच्च हुनेछ ।
स्मार्ट होम इन्जिनियर
घर स्मार्ट हुनेवाला छन् । पश्चिमा त सुरु पनि भइसकेको छ। भारत, नेपालजस्ता मुलुकमा पनि त्यो धेरै टाढा छैन । जब घर स्मार्ट प्रविधिमा चल्नेछ । त्यसैले स्मार्ट होम एक्सपर्टको माग पनि उच्च हुने निश्चित छ।
आउनेवाला समय भर्चुअल रियलिटीको हो । चलचित्र ३डीमा बन्न थालेका छन् । अब त टेलिभिजन पनि ३डी भएको छ। आगामी समयमा थ्रीडी इन्जिनियर्सको कमाई निकै धमाल हुनेछ ।
प्रविधिमा मात्र होइन, संसार पनि बदलिनेछ । नयाँ प्रकारका पूर्वाधार निर्माण हुनेछन् । स्थान कम हुनेछ, आवश्यकता बढी । त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणको तरिका पनि बदलिनेछ । आफूलाई त्यही ढंगले तयार राख्नुस्, नाम र दाम सुनिश्चित छ ।
अहिले पनि प्राइमरी टिचरको कमी संसारभर छ । आगामी दिनमा त यसको माग झनै बढ्ने निश्चित छ । किनभने हायर एजुकेशन त प्रविधिको साहरा चल्नेछ । तर ससाना बालबालिकालाई त्यतिबेला पनि हातबाटै सम्हाल्नु आवश्यक हुनेछ ।
बेच्न जान्नु निकै ठुलो कला हो । त्यसैले ते नेपालीमा उखानै छ, ‘बोल्न जान्नेको पिटो बिक्छ, नजान्नेको चामल पनि बिक्दैन’ । आगामी दिनमा सेल्स म्यानेजरको माग उच्च हुने निश्चित छ । जे बन्नेछ, त्यो बेच्नु पनि पर्नेछ । तब बेच्नेवाला अर्थात सेल्स म्यानेजरको माग बढ्नेछ ।
यो एउटा यस्तो पेसा हो जसको माग अहिले पनि पूरा हुन सकेको छैन । त्यसैले नर्सको माग उहिले, अहिले र आगामी दिनमा पनि उच्च हुनेछ । यसमा कमी आउने कुनै सम्भावना छैन । विशेषगरी कार्यव्यस्तताका कारण विश्वभर वृद्धहरुको हेरचाहमा समय हुने छैन । त्यसैले नर्स पेसा अपनाउनेहरुले अवसर प्रचुर मात्रामा पाउने निश्चित छ। एजेन्सी
Previous post: सफलताका लागि विद्यार्थीलाई सूत्र
Next post: हैट, केटा र केटीको अन्डरवेयर सँगै सुकाउन नहुने पनि कानुन (संसारका विचित्र कानुनहरु)
सरकार–सिके सहमतिः प्रमद्वारा हिंसाको बर्काे फाल्न आग्रह
प्रतिबन्धबारे विप्लवको आधिकारीक धारणा -अबको कारवाही केपी-बादल माथि (विज्ञप्ति)